महोत्सवको पनि महोत्सव, लेखनाथ महोत्सव ! तयारी तिब्र, ७५ प्रतिशत स्टल बुकिङ – Arthik Awaj
महोत्सवको पनि महोत्सव, लेखनाथ महोत्सव ! तयारी तिब्र, ७५ प्रतिशत स्टल बुकिङ
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर १९ गते बुधबार १०:५७ मा प्रकाशित
पोखरा, १९ मंसिर । सात तालको बाटिका शहर लेखनाथमा ‘१५ औँ लेखनाथ महोत्सव’ हुने भएको छ । पुसको ५ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको तयारीलाई तिब्र बनाइएको आयोजक लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ ।
‘महोत्सव लेखनाथको संस्कृित, स्थानीय उत्पादन, विकास र सम्वृद्धि’ नाराका साथ हुने महोत्सवमा ३ सय ५० वटा स्टल रहनेछन् । महोत्सवमा रहने स्टलहरु मध्ये ७५ प्रतिशत बुकिङ भइसकेको अध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारीले जानकारी दिए । महोत्सवमा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिएर स्टल राखिएको उनले बताए ।
महोत्सवको ३ लाख भन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने आयोजकको अपेक्षा रहेको महासचिव भरतकुमार अधिकारीले बताए । ‘लेखनाथ महोत्सवमा वर्षेनी दर्शकको उत्साहजनक उपस्थिति रहँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लेखनाथ महोत्सवलाई महोत्सवको पनि महोत्सव भनेर ब्राण्डिङ गर्न सफल छौं । यस पटक पनि दर्शकको उल्लेख्य उपस्थिति रहनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
महोत्सवमा १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्मको आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको संघका उपमहासचिव तथा प्रचार–प्रसार संयोजक गोपिचन्द्र बास्तोलाले जानकारी दिए । एक करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी ९० लाख रुपैयाँ खर्च कटाउँदा ३५ लाख रुपैयाँ बचत गर्ने आयोजकको अनुमानित लक्ष्य छ ।
औद्योगिक उत्पादन तथा हस्तकलाका बस्तुहरुको बजार प्रवद्र्धन गर्ने महोत्सवको लक्ष्य छ । स्थानीय, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन, आवश्यक ज्ञान तथा उद्यमशीलता र प्रविधिको हस्तान्तरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा उत्पादित औद्योगिक एवं दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा सेवाहरुको प्रवद्र्धन गरिने निबर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले जानकारी दिए । ‘जातीय भेषभुषा, कला, संस्कृति, रीतिरिवाजको जगेर्नामा टेवा पु¥याउँदै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवद्र्धनमा पनि महोत्सव सहयोगी हुनेछ,’ उनले भने ।
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको सम्मानमा महोत्सवका अवसरमा देशव्यापी खुल्ला कविता प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ । गण्डकी तारा गायन प्रतियोगिता, राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुको दैनिक प्रस्तुति, बाल उद्यान, खाना महोत्सव, राष्ट्रिय लोकदोहोरी कार्यक्रम पनि महोत्सवको आकर्षण बन्नेछ । रत्यौली गीत प्रतियोगिता, पप कन्सर्ट, विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता पनि महोत्सवमा समावेश गरिएको छ ।
महोत्सवलाई व्यवस्थित गरी सफल बनाउन १ सय ३३ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति चयन गरेर तयारीलाई तिब्र बनाइएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । ८ सदस्यीय निर्देशन समिति र २५ सदस्यीय सल्लाहकार समितिसहित ४० वटा विभिन्न उपसमितिहरु चयन भएका छन् ।
लेखनाथ क्षेत्रको पर्यटन सहित समग्र विकासमा महोत्सवले प्रत्यक्ष टेवा पु¥याउन सफल रहेको संघका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरीले बताए । ‘लेखनाथ महोत्सवमा दर्शकको आकर्षण उत्साहजनक रहन्छ,’ उनले भने, ‘लेखनाथ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महोत्सव सफल बनाउन सम्पूर्णको साथ आवश्यक छ ।’